China abicah Foley Catheter kunye Ubushushu Probe mveliso kunye nabenzi | Kangyuan
• Yenziwe nge-100% yokungenisa kwibakala lonyango.
• Ivaluva yokutshekisha enemibala yokuchongwa kobukhulu obahlukeneyo.
• Lolona khetho lufanelekileyo kwizigulana ezibaluleke kakhulu zokugcina ipayinti ukulinganisa ubushushu bemizimba yazo.
• Kukuva kobushushu.
Isetyenziselwa ukwenziwa kwe-catheterization yekliniki rhoqo okanye i-urethral drainage yokubeka iliso ngokuqhubekayo kubushushu be-bladder yesigulana esweni.
Le mveliso iqulethe i-urethral drainage catheter kunye ne-probe yeqondo lobushushu. I-catheter ye-Urreral ye-catheter iqulathe umzimba we-catheter, ibhaluni (ingxowa yamanzi), intloko yesikhokelo (incam), ujongano lwe-lumen ye-lumen, ukugcwalisa ujongano lwe-lumen, i-interface yokulinganisa i-lumen interface, ujongano lwe-lumen (okanye hayi), iplagi ye-lumen egungxulayo (okanye hayi) kunye nomoya ivelufa. Ubushushu probe ineprojekhthi yobushushu (i-chip eshushu), iplagi yojongano kunye nesikhokelo sokwakhiwa kwecingo. I-Catheter yabantwana (8Fr, 10Fr) inokubandakanya ucingo lwesikhokelo (ngokuzithandela). Umzimba we-catheter, intloko yesikhokelo (i-tip), ibhaluni (i-sac yamanzi) kunye ne-lumen interface nganye yenziwe nge-silicone; ivalve yomoya yenziwe nge-polycarbonate, iplastiki ye-ABS kunye ne-polypropylene; iplagi egungxulwayo yenziwe nge-PVC kunye ne-polypropylene; ucingo isikhokelo yenziwe PET zeplastiki kunye nobushushu probe yenziwe PVC, ifayibha kunye nezinto zesinyithi.
Le mveliso ixhotywe nge-thermistor evakalelwa kubushushu obuphambili besinyi. Uluhlu lokulinganisa ngu-25 ℃ ukuya ku-45 ℃, kwaye ukuchaneka kuku- ± 0.2 ℃. Ixesha lokulinganisa ixesha eli-150 kufuneka lisetyenziswe ngaphambi komlinganiso. Amandla, isinxibelelanisi sokuzahlula amandla, ukuthembeka kwebhaluni, ukuxhathisa ukugoba kunye nenqanaba lokuhamba kwale mveliso ziya kuhlangabezana neemfuno ze-ISO20696: umgangatho we-2018; Ukuhlangabezana neemfuno zokuhambelana kombane ze-IEC60601-1-2: 2004; ukuhlangabezana neemfuno zokhuseleko zombane IEC60601-1: 2015. Le mveliso iyinyumba kwaye ayiyinzalo nge-ethylene oxide. Inani elishiyekileyo le-ethylene oxide kufuneka libe ngaphantsi kwe-10 μg / g.
Amanqaku / Ukucaciswa
Ikhowudi yokuchonga umbala
Ukucaciswa kwesiFrentshi (Fr / Ch)
Ububanzi ngegama elingaphandle lombhobho we-catheter (mm)
ukukhanya kwesibini, ukukhanya kwesithathu
Ukukhanya kwesibini, ukukhanya kwesithathu, ukukhanya okungaphandle
1. ukuthambisa ajikeleze: catheter kufuneka lubricated kunye zokuthambisa zonyango phambi kokuba kufakwe.
2. Ukufaka: faka i-catheter e-lubricated kwi-urethra ukuya kwi-bladder ngononophelo (umchamo ukhutshiwe ngeli xesha), emva koko faka i-3-6cm kwaye wenze ibhaluni ingene ngokupheleleyo kwisinyi.
3. Ukungenisa amanzi: Usebenzisa isirinji ngaphandle kwenaliti, galela ibhaluni ngamanzi angenazintsholongwane okanye i-10% yesinyibilikisi esinamandla. Umthamo ocetyiswayo ukuba usetyenziswe uphawulwe kwifanele ye-catheter.
4. Ukulinganisa ubushushu: ukuba kukho imfuneko, qhagamshela isiphelo sangaphandle kwenkqubo yokujonga ubushushu kunye nesokethi esweni. Ubushushu bezigulana bunokujongwa ngelona xesha ledatha eboniswe liliso.
5. Susa: Xa ususa i-catheter, okokuqala hlukanisa i-interface yomgca wobushushu kwisilumkiso, faka isirinji engenanto ngaphandle kwenaliti kwivelufa, kunye nokutsala amanzi amdaka kwibhaluni. Xa umthamo wamanzi kwisirinji usondele kulawo wenaliti, i-catheter inokutsalwa kancinci, okanye ityhubhu yomzimba inokunqunyulwa ukususa i-catheter emva kokukhupha amanzi ngokukhawuleza.
6. Ukuhlala: Ixesha lokuhlala lixhomekeke kwiimfuno zeklinikhi kunye neemfuno zokonga, kodwa elona xesha liphezulu lokuhlala alinakugqitha kwiintsuku ezingama-28.
1. urethritis Acute.
2. Isifo seprostatitis.
3. Ukungaphumeleli kwe-intubation yokwaphuka kwethambo kunye nokwenzakala kwe-urethral.
4. Izigulana zithathwa njengezingafanelekanga ngoochwephesha.
1. Xa uthambisa i-catheter, musa ukusebenzisa i-lubricant equkethe i-substrate yeoyile. Umzekelo, ukusebenzisa ioyile yeparafini njengesithambisi kuya kubangela ukuqhekeka kwebhaluni.
2. Ubungakanani obahlukeneyo bee-catheters kufuneka zikhethwe ngokobudala ngaphambi kokusetyenziswa.
3. Phambi kokuba uyisebenzise, ​​jonga ukuba ingaba i-catheter ihleli kakuhle na, nokuba ibhaluni iyavuza na okanye hayi, nokuba ukutsala akunakuthintelwa. Emva kokudibanisa iplagi yokuhlola ubushushu kunye nokubeka esweni, nokuba idatha ebonisiweyo ayiqhelekanga okanye ayikho.
4. Nceda ujonge ngaphambi kokuyisebenzisa. Ukuba nayiphi na imveliso eyodwa (epakishwe) ifunyenwe inale miqathango ilandelayo, akuvumelekanga ngokungqongqo ukuyisebenzisa:
A) ngaphaya komhla wokuphelelwa kwenzalo;
5. Abasebenzi bezonyango kufuneka bathathe amanyathelo athambileyo ngexesha le-intubation okanye i-extubation, kwaye basikhathalele isigulana nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhluthwa kokuthanjiswa komzimba ukuthintela iingozi.
Inqaku elikhethekileyo: xa ityhubhu yomchamo ehlala emva kweentsuku ezili-14, ukunqanda ityhubhu inokutyibilika ngenxa yongcoliseko lomzimba wamanzi amdaka kwibhaluni, abasebenzi bezonyango banokufaka intshontsho yamanzi ngebhaluni ngaxeshanye. Indlela yokusebenza yile ilandelayo: gcina ityhubhu yokuchama ikwimeko egciniweyo, uzobe amanzi angenabala ngaphandle kwebhaluni ngesirinji, emva koko ufake amanzi angenabungozi kwibhaluni ngokokulingana nomthamo.
6. Faka ucingo lwesikhokelo kumbhobho wokuhambisa amanzi wecatheter yabantwana njenge-intubation encedisayo. Nceda uzobe intambo yesikhokelo emva kokungena.
7. Le mveliso icocwe nge-ethylene oxide kwaye inexesha elisemthethweni leminyaka emithathu ukusukela kumhla wokuveliswa kwayo.
8. Le mveliso inokusetyenziselwa ukusetyenziswa kweklinikhi, iqhutywa ngabasebenzi bezonyango, kwaye itshatyalaliswe emva kokusetyenziswa.
9. Ngaphandle kokungqinisisa, kuya kuthintelwa ukuba kusetyenziswe inkqubo yokuskena inkqubo yenyukliya yokuthintela ukuphazamiseka okunokubangela ukusebenza okungalinganiyo kobushushu.
10. Ukuvuza okukhoyo ngoku kwesigulana kuya kulinganiswa phakathi komhlaba kunye ne-thermistor kwi-110% yelona xabiso liphezulu lonikezelo lwenethiwekhi.
Imiyalelo yokubeka iliso
1. Ukubeka esweni iiparameter ezininzi (imodeli mec-1000) kuyacetyiswa kule mveliso;
3. Le mveliso iyahambelana nenkqubo yokujonga ubushushu be-YSI400.
Iingcebiso zokuhambelana kwe-Electromagnetic
Le mveliso kunye nezixhobo zokubeka esweni ezixhunyiwe ziya kuthatha amanyathelo okhuseleko ngokubhekisele kungqinelwano lwe-electromagnetic (EMC) kwaye ziya kufakwa kwaye zisetyenziswe ngokuhambelana nolwazi lokuhambelana kombane oluchazwe kulo myalelo.
Imveliso kufuneka isebenzise ezi ntambo zilandelayo ukuhlangabezana neemfuno zokukhutshwa kombane kunye nokuchasana nokuphazamiseka:
Umgca Power （16A line
2. Ukusetyenziswa kwezixhobo, iisenzi zokuziva kunye neentambo ezingaphandle koluhlu oluchaziweyo kunokunyusa ukukhutshwa kombane kweso sixhobo kunye / okanye kunciphise ukukhuselwa kombane kweso sixhobo.
3. Le mveliso kunye nesixhobo sokubeka iliso esiqhagamshelekileyo asinakusetyenziswa kufutshane okanye sifakwe kwezinye izixhobo. Ukuba kukho imfuneko, ukujongwa kufutshane kunye nokuqinisekiswa kuya kwenziwa ukuqinisekisa ukusebenza kwayo okuqhelekileyo kuqwalaselo olusetyenzisiweyo.
4. Xa ukufakwa kwesiginali amplitude isezantsi kunesona silinganisi sincinci esichaziweyo kwiinkcukacha zobuchwephesha, umlinganiso unokuba ungachanekanga.
5. Nokuba esinye isixhobo siyangqinelana neemfuno zokuphehlelelwa zeCISPR, oko kunokubangela ukuphazamiseka kwesi sixhobo.
6. Izixhobo zonxibelelwano eziphathekayo nezihambelanayo ziya kuchaphazela ukusebenza kwesixhobo.
7. Ezinye izixhobo eziqulethe ukungcola kwe-RF zinokuchaphazela isixhobo (umzekelo, iselfowuni, iPDA, ikhompyuter engenantambo).
Egqithileyo I-Laryngeal Mask Airway yoSetyenziso oluNye
Okulandelayo: 2 Indlela ye-Silicone Foley Catheter eneTiemann Tip
i-catheter eneprosesa yobushushu
ipayipi yokuhambisa amanzi eneqondo lobushushu
i-catheter ye-foley enobushushu be-probe
i-catheter ye-foley ene-sensor ubushushu
i-catheter ye-silicone eneprosesa yobushushu
i-catheter ye-silicone ene-sensor ubushushu
abicah foley catheter ngobushushu probe
abicah foley catheter nge sensor ubushushu
ubushushu sensig abicah catheter
ubushushu bufumana i-catheter foley
ubushushu buchaphazela abicah foley catheter
Ubushushu bokubona i-catheter ye-urethral
lobushushu sensinh foley catheter
i-catheter ye-urethral enobushushu be-probe
i-catheter ye-urethral ene-sensor ubushushu
i-catheter yomchamo eneprosesa yobushushu
i-catheter yomchamo ene-sensor ubushushu
Ukuqiniswa kweMask yeLaryngeal yeMoya
Indlela ye3 Silicone Foley Catheter